» लकडाउनमा पनि नेपाल आईडलका प्रतियोगीहरुको यस्तो जोश
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १४:०४
मकवानपुर, २३ जेठ । नेपाल आईडल सिजन ३ को अन्तिम एपिसोडहरु छायाँकन र प्रसारण हुनु अगावै लक डाउन भएपछि अहिले नेपाल आईडल केही समयका लागि रोकिएको छ । तर यसका प्रतियोगी र निर्माण टिम भने यो लकडाउनको समयमा पनि दर्शक श्रोताहरुसँग निरन्तर जोडिरहने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसैको निरन्तरता स्वरुप नेपाल आईडलले सोमबार विशेष एपिसोड युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । उक्त एपिसोडमा सिजन ३ का केही प्रतियोगीहरुले प्रस्तुति दिएका थिए । यस एपिसोडको सुरुवातमा अमेरिकन आईडलमा नेपालका दिवेश पोखरेल अर्थात अर्थर गन उपविजेता बनेकोमा बधाई दिँदै विशेष सामग्री प्रसारण गरिएको थियो । त्यसपश्चात दिवेशसँग नेपाल आईडलका निर्णायक र होष्टले गरिएको कुराकानीको अंश प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपश्चात नेपाल आईडल सिजन ३ का प्रतियोगीहरुले घरैबाट रेकर्ड गरेर पठाएका भिडियो सामग्रीहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । उनीहरुको समग्र प्रस्तुति कस्तो थियो त ? अनि दर्शकहरुले कस्तो प्रतिक्रिया दिए ? आउनुहोस् यस बारेमा चर्चा गरौँ । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
एपिसोडको सुरुवातमा सिजन ३ मा उत्कृष्ट १२ सम्म पुगेकी मकवानपुरकी स्वस्तिका ढकालको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । स्वस्तिकाले ‘थामेर किन छोड्यौ हातहरु’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । स्वस्तिका मकवानपुरको हेटौँडा ८ कमाने निवासी हुन् । उनको प्रस्तुतिमा दर्शकहरुले सकरात्मक कमेन्ट गरेका छन् । उनी यस अघि सिजन २ मा पनि उत्कृष्ट २० सम्म पुग्न सफल भएकी थिईन् । त्यसपश्चात सिजन ३ को वाईल्ड कार्डमा भिडेकी हेटौँडाकी मिग्मा लामाको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । उनले एक सहयोगीका साथमा गीतार बजाउँदै नविन के भट्टराईको ‘आँखामा तिमीलाई’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । मिग्मा यसअघि उत्कृष्ट १० सम्म पुगेर बाहिरिएकी थिईन् । त्यसपश्चात उनी पून वाईल्डकार्ड राउण्डमा भिडेकी थिईन् । वाईल्डकार्ड राउण्डको रिजल्ट आउन बाँकी छ । उत्कृष्ट १० को प्रस्तुतिका क्रममा प्रविण बेड्वालसँग युगल प्रस्तुति दिएकी मिग्माले पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेता पनि उनी शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । शोबाट बाहिरिएपछि उनले एउटा डुयटका साथै एउटा सोलो गीत पनि रेकर्ड गराएकी छिन् । उनले प्रतियोगितामा ३ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । उनको प्रस्तुतिमा दर्शकहरुको सकरात्मक प्रतिक्रिया छ ।
तेस्रो नम्बरमा सिजन ३ की वाईल्डकार्ड प्रतिस्पर्धी ममता गुरुङको प्रस्तुतिलाई समावेश गरिएको थियो । ममताले ‘खुला आकाश’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । यसअघि उत्कृष्ट ९ सम्म पुगेर बाहिरिएकी ममता गुरुङ नेपाल आईडल सिजन ३ को मञ्चमा सबैको मन जित्न सफल प्रतियोगी हुन् । उत्कृष्ट ९ मा पुगेसँगै बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी ममता त्यसपछि शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । रेडियो साराङकोटमा रेडियो जक्कीका रुपमा कार्यरत ममताले पोखराकी हुन् । चौथो नम्बरमा झापाकी रचना रिमालले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले नेपाली चलचित्र ‘मुग्लान’ को ‘पिठ्युँमा स्याउलाको भारी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको प्रस्तुतिमा दर्शकहरुले सकरात्मक प्रस्तुति दिएका छन् । गाला राउण्डको तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हप्तामा गरी ३ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेता पनि रचना यस अघि उत्कृष्ट ८ मा सम्म पुगेकी थिईन् । रचनाले गाला राउण्डमा कुनै अवार्ड नजिते पनि वाईल्डकार्डमा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् ।
यस विशेष एपिसोडको पाँचौँ नम्बरमा प्रतियोगिताको वाईल्ड कार्डमा भिडेका किरण कुमार भुजेलले प्रस्तुति दिएका थिए । किरणले गीतारमा ‘तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिलाई दर्शकहरुले सकरात्मक कमेन्ट गरेका छन् । किरण यसअघि नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ७ सम्म पुगेका थिए । महोत्तरीको बर्दिवास निवासी किरणले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म ४ वटा अवार्ड जितेका छन् । त्यस्तै छैटौँ नम्बरमा प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ६ सम्म पुग्न सफल मुस्कान रानाभाटको प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो । उनले अमृत झैँ मिठो बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको प्रस्तुतिलाई पनि दर्शकहरुले सकरात्मक कमेन्ट गरेका छन् । पोखरा निवासी मुस्कानले वाईल्ड कार्ड राउण्डमा भने सहभागिता जनाएकी छैनन् ।
विशेष एपिसोडको सातौँ नम्बरमा सिजन ३ की एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता मेघा श्रेष्ठले प्रस्तुती दिएकी थिईन् । उनले उनका दाईको सहयोगमा गीतारमा ‘प्रेमसँग हारेँ’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेकी थिईन् । उनको प्रस्तुतिलाई दर्शकहरुले वेल प्रिपियर्ड भन्दै कमेन्ट गरेका छन् । काठमाडौँकी मेघा यसअघि उत्कृष्ट ५ सम्म पुगेकी थिईन् । त्यसपश्चात उनी वाईल्ड कार्ड राउण्डमा पनि भिडेकी छिन् । मेघाले गोल्डेन माईकसँगै गाला राउण्डमा ८ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । त्यस्तै आठौँ नम्बरमा चितवनका केविन ग्लान तामाङले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले गीतारमा ‘तिम्रो न्यानो’ बोलको गीत गाएका थिए । केविनको गीत कुरेर बसेका दर्शकहरुले उनको प्रशंसा समेत गरेका छन् । केविन यस सिजनको उत्कृष्ट ४ मा भिडिरहेका छन् । केविनले नेपाल आईडल सिजन ३ मा अहिलेसम्म ७ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुति र उत्कृष्ट ५ को प्रस्तुति पश्चात खुलेको भोटिङमा गरी दुई पटक सर्वाधिक भोट समेत प्राप्त गरेका थिए ।
विशेष एपिसोडको नवौँ नम्बरमा बर्दियाका प्रविण बेड्वालले प्रस्तुति दिएका थिए । नेपाल आईडलमा संगीतका उस्तादका रुपमा चिनिएका प्रविणले ‘तिमी आउन सक्छौ’ बोलको गीत गाएका थिए । चौतर्फि प्रशंसा बटुलेका प्रविणको यो प्रस्तुतिलाई पनि धेरै दर्शकहरुले सकरात्मक कमेन्ट दिएका छन् । प्रविणले नेपाल आईडलको स्टेजमा अहिलेसम्म ८ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले गाला राउण्डको उत्कृष्ट ७ को प्रस्तुतिपश्चात खुलेको भोटिङमा सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका थिए । उनी उत्कृष्ट ४ मा भिडिरहेका छन् । त्यस्तै दशौँ नम्बरमा यस सिजनकी सर्वाधिक अवार्ड विजेता सज्जा चौलागाईले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले ‘परेलीमा लुकाई राख न’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेकी थिईन् । नेपाल आईडलमा सर्वाधिक अवार्ड जितेकी सज्जाले गाला राउण्डको नवौँ हप्तासम्ममा ११ वटा अवार्ड जितिसकेकी छिन् । उनी मोरङ निवासी हुन् । उनी पनि उत्कृष्ट ४ मा भिडिरहेकी छिन् । विशेष एपिसोडको अन्तिममा म्याग्दी घर भई पोखरा बसिरहेका नेशन पुन मगरले प्रस्तुति दिएका थिए । उत्कृष्ट ४ मा भिडिरहेका नेशले पियानो र गीताकारका साथमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले ‘नरिसाउ न’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिको चौतर्फी चर्चा भईरहेको छ । नेशनले अहिलेसम्म ७ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले गाला राउण्डको पहिलो र सातौँ हप्ताको प्रस्तुति पश्चात सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका थिए । आदरणीय दर्शकविन्द तपाईलाई नेपाल आईडलको विशेष एपिसोड कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।